Shirka Maamullada Degmooyinka gobolka Banaadir oo looga hadlay Qorshaha Horumarinta 2019[Sawirro] | SAHAN ONLINE
MUQDISHO – Shirka todobaadlaha ah ee Guddoomiyeyaasha 17ka degmo oo guddoominayey Duqa Muqdisho ahna Guddoomiyaha Gobolka Banaadir Mudane Cabdiraxmaan Cumar Cismaan (Eng. Yarisow) ayaa lagaga hadlay qorshaha faya dhowrka Caasimadda, amniga, Olalaha Isxilqaan iyo qaban soo bandhiggidda Sawirrada taariikhda Muqdisho.
Shirkan ayaa ku qabsoomay xarunta Dowladda Hoose ee Degmada Warta Nabadda, iyadoona Guddoomiyeyaasha Degmooyinka Gobolka Banaadir ay soo bandhigeen waxqabadka sanadkan ee arrimaha bulshada, la dagaalanka musuq maasuqa iyo baahinta adgeeyada asaasiga ah.
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ayaa boggaadiyey isku duubnida dhinaca amniga ee shacabka iyo hay’adaha amniga, kaas oo horseeday in laga hortago falal badan oo argagixisada Alshabaab ay u maleegeen shacabka.
Arrimaha sida gaarka ah ay uga wada hadleen Maamulka Gobolka iyo Guddoomiyeyaasha Degmooyinku ayaa waxaa ka mid ahaa qorshaha dib u habaynta bulaacadaha Caasimadda oo haatan ay howlgaleen bulaacadaha mara degmooyinka Xamarweyne iyo X/Jajab, iyadoo ay soo dhammaatay daraasadda ku aaddan sidii xal loogu heli lahaa caqabadaha ku xeeran faya-dhawrka degmooyinka Gobolka oo iska kaashadeen Gobolka Banaadir iyo UNDP.
Duqa Muqdisho ayaa bogaadiyey sida bulshada Gobolku ay uga qeyb qaadanayaan Olalaha Isxilqaan, kaddib markii muddo kooban lagu hirgelyey qorshaha dib u dhiska Tiyaatar-ka iyo Madxafka Qaranka, isagoona ku ammaanay Shaqaalaha Gobolka Banaadir iyo kan Warta Nabadda oo todobaadkan sameeyey olale ay ku nadiifinayaan Garoonka Ciyaaraha ee Muqdisho.